RASMI: Majalada France Football Oo Ku Dhawaaqday Abaal Marin Cusub Oo Ballon D’Or Ah, - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 19, 2019 at 17:09 RASMI: Majalada France Football Oo Ku Dhawaaqday Abaal Marin Cusub Oo Ballon D’Or Ah,2019-09-19T17:09:01+01:00 CAYAARAHA
Majalada caanka ah ee France Football oo ah majalada bixisa abaal marinta Ballon D’Or ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay bixinayso abaal marin cusub oo Ballon D’Or ah taas oo lagu soo kordhiyay abaal marinihii hore.
Majalada France Football ee dalka France ka soo baxda ayaa sanadkii hore samaysay abaal marinta da’yarka aduunka ugu fiican laakiin waxay sanadkan soo kordhiyeen abaal marinta goolhayaha aduunka ugu fiican oo loo bixiyay Trophée Yachine.
Markii ugu horaysay tan iyo sanadkii 19643 kii waxay majalada France football bixin doontaa abaal marin loo gaar yeelay goolhayaha xidiga sanadka ugu fiican iyada oo lagu dhawaaqi doono tobanka musharax ee abid ugu horayn doona abaal marintan.
Sida lagu sheegay shaacinta France Football ee abaal marinta goolhayaha aduunka ugu fiican, marka la soo gaadho October 21 waxaa lagu dhawaaqi doonaa liiska 10 ka musharax ee goolhayayaasha aduunka ugu fiican ee ku tartami doona abaal marinta Trophée Yachine.
France Football ayaa sanadkii 1963 kii waxay abaal marinta goolhayaha aduunka ugu fiican siiyeen Lev Yachine kaas oo ah goolhayaha kaliya ee abid ku guulaystay abaal marintan laakiin markale sanadkan waxaa la bixin doonaa abaal marin Ballon d’Or ah oo goolhayaha ugu fiican la siin doono.
Goolhayihii ugu horeeyay ee abaal marinta Ballon d’Or ku guulaystay ee Lev Yachine ayaa geeriyooday sanadkii 1990 kii isaga oo ahaa 60 sano jir.
Laakiin ilaa hadda lama oga haddii France Football ay abaal marinta cusub ee Ballon d’Or ee goolhayaha aduunka ugu fiican fiican ee Trophée Yachine ay meesha ka saari doonto in goolhayayaashu ay u tartamaan abaal marinta wayn ee Ballon d’Or ee xidiga aduunka ugu fiican.
Laakiin waxaa la filayaa in goolhayayaasha aduunka ugu fiicani ay ku tartami doonan abaal marinta Trophée Yachine isla markaana ay wali qayb ka sii noqon doonaan 30 ka musharax ee Ballon d’Or.
« Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Eintracht Frankfurt iyo Arsenal ee tartanka Europa League
Madaxweynihii ugu horeeyay ee xukunka looga riday kacdoonkii Carabta oo geeriyooday »